विचित्र विश्व | ehalkhabar
Home विचित्र विश्व
घरभित्र विभिन्न बिरुवा रोप्नाले प्रदुषण रहित हुने छ, साथै यसका फाइदाबारे जानुहोस
बाहिरी वातावरण जति नै फोहोर र प्रदुषणयुक्त भएपनि आफ्नो घरभित्र भने सबैलाई स्वच्छ हावा नै मन पर्छ । यसैका लागि मान्छेले घरभित्र विभिन्न बोटविरुवाहरु रोप्ने गरेका छन् । के तपाईलाई थाहा छ किन य...	Read more
यहाँ कुखुराको मासु जस्तै सडकमै पाइन्छ सर्पको मासु !
पुस २७ । तपाईंले सडकको किनारामा कुखुराको मासु बेच्दै गरेको देखिरहनु भएको होला । के तपाईंले कुखुराको जस्तै सर्पको मासु बेच्दै गरेको देख्नु भएको छ ? यो ठाउँमा कुखुराको भन्दा सर्पको मासु सजिलै...	Read more
पुस १८ । चीन सरकारले १७ करोड यस्ता क्यामेरा लगाएको छ, जो आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्ट टेक्नोलोजीमार्फत कुुनै व्यक्तिको अनुुहार, उमेर तथा लिङ्गको पहिचान गर्नमा माहिर छन् । आउँदो तीन वर्षमा यस्ता...	Read more
खबरदार ! यो विषालुु बिरुवालाई नछुनुु होला : तुरुन्तै हुन्छ मृत्युु
पुस १७ । के तपाईंलाई थाहा छ, विश्वमा यस्ता ८ हजार जति वनस्पतिका प्रजातिहरु छन् जो अत्यन्तै विषालुु हुन्छन् । ती मध्ये केही विरुवालाई छुने बित्तिकै मृत्युु हुन्छ भने कुुनैलाई खाए पछि । यदि यस...	Read more
चीनले बनायो सोलार रोड : के छन् त यसका विशेषता ?
पुस १५ । छिमेकी मुलुक चीनले सोलार प्यानलबाटै सडक बनाएको छ । चीनको जीनान शहरमा करिब १.६ किलोमिटर सोलर सडक बनाइएको हो जुन अस्ति सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएको छ । यो सडकको विशेषता भनेको यसमा गुड्न...	Read more
खबरदार ! पाइन्टको खल्तीमा मोबाइल राख्नुहुन्छ : हुन सक्छ नपुंसकता
पुस १२ । मोबाइल फोनको बढ्दो प्रयोगले मानिसको स्वास्थ्यमा कैयौं गम्भीर प्रश्नहरु उब्जाउन थालेको छ । बेलायती फर्टिलिटी एक्सपर्टको एक अध्ययनले पुरुषलाई आफ्नो पाइन्टको खल्तीमा मोबाइल नराख्न सल्ल...	Read more
सगरमाथालाई पनि ढाक्न पुुग्छ यो विवाहको कपडाले
पुस ६ । आजकल आफ्नो बिहेको ड्रेसको लागि बेहुला–बेहुलीले के–के सम्म गर्दैनन् ! म्याचिङ ज्वलरी, फुटवेयरदेखि लिएर थुप्रै सामानहरु आफैँ जुटाउने गर्दछन् केवल विवाहमा राम्रो र आकर्षक देखिनको लागि ।...	Read more
यी ५ वस्तु बिर्सेर पनि अर्काको प्रयोग नगरौं : अशुुभ हुन सक्छ !
पुस ५ । हामीले हाम्रो जीवनमा छोटा–छोटा गल्तीहरु गरिरहेका हुन्छौँ जसको हामीलाई अनुमानसम्म हुँदैन । यिनै गल्तीका कारण भविष्यमा हामीले विभिन्न समस्याहरु झेल्नुुपर्दछ । सामान्यतया हामी एकअर्काको...	Read more
मानव शरीर प्रकृतिको खानी : जानौं, के–के बन्छ हाम्रो शरीरबाट ?
मंसिर १९ । एउटा मानवको शरीरभित्र के–के हुन्छ ? साधारण मानिसले पनि केही बताउन सक्छ । तर वास्तविकता अर्कै छ । हेर्नुहोस् – एउटा मानव शरीरभित्र पाइने तत्वहरुबाट के कस्ता वस्तुु बनाउन सकिन्छ – १...	Read more
मंसिर १९ । कसैको झुुट पत्ता लगाउनका लागि कुनै ज्ञानको जरुरत पर्दैन । केही सामान्य जानकारीकै आधारमा तपाईं कोही साँचो बोलेको छ कि झुुटो भन्ने पत्ता लगाउन सक्नुुहुन्छ । अमेरिकाको FBI ले पनि यो...	Read more